I-Frontenac Cottage eduze neLake Pepin. 29023 - I-Airbnb
I-Frontenac Cottage eduze neLake Pepin. 29023
Itholakala izinyathelo kude neFrontinac State Park. Ukufinyelela ebhishi lomphakathi kukude kakhulu. Indawo enhle yokuhamba ngebhayisikili nokuhamba izintaba. Kuhle ukushushuluza eqhweni ebusika. I-Frontinac Golf iqhele ngamamayela amabili. Ikheli lithi 29023 Westervelt Way Frontenac,MN 55026
Sisanda kwengeza abantu abangu-3 i-Healthmate Sauna ezingeni eliphansi. Ukuhlehla okuphelele futhi ubalekele.
Ikotishi elincane elithandekayo elinompheme omuhle omboziwe. Siseduze eduze kwaseFrontenac State Park futhi siqhelelene nolwandle lwaseFrontenac. Kunezinkukhu kwamakhelwane ongazibukela futhi ujabulele-akukho maqhude. Kuyajabulisa futhi kuphumule ukukubuka. Kukhona indawo yokucima umlilo egcekeni elingemuva. Sisanda kwengeza abantu abangu-3 i-HealthMate Sauna ezingeni eliphansi. Indawo enhle yokuza uphumule.
4.86 · 167 okushiwo abanye
Kufana nokubuyela emuva. Izindlu eziningi zakhiwa ngesikhathi seMpi Yombango. Isohlwini ku-National Registry of Historic places. I-Frontinac State Park inokubukwa okudonsa umoya nezindlela ezinhle zokuhamba izintaba. I-Lake Pepin yinhle impela futhi ibhishi lomphakathi liqhelelene namabhulokhi ambalwa. Idolobhana liyindawo enhle yokuhamba ngezinyawo kanye/noma ukugibela ibhayisikili. Kukhona ukuqashwa kwezikebhe e-Hanson's Harbour eduzane, i-Cannon Valley bike trail itholakala e-Red Wing futhi ikuyisa e-Cannon Falls.
Ukuzihlola ngokwakho, kodwa kutholakala ngefoni noma ngombhalo.